Aung's Investment: 1/24/10 - 1/31/10
Mid-week Alert - Correction Warning
ဟိုတနေ့ကပဲ Market Volatilityနည်းသွားပြီထင်တယ်လို့ ပြောတုန်းရှိသေး President Obama နဲ့ Premier Wenတို့ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ဒီPostကို Warningအနေနဲ့ ရေးလိုက်ပါတယ်။
Dow Jones Industrial Average (DJI) Index, S&P 500 Index နဲ့ NASDAQ Composite Indexတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် Jan 20ကစပြီး ပက်ပက်စက်စက် ပြုတ်ကျကြပါတယ်။ မသိသေးတဲ့လူတွေကို နည်းနည်းပြောပြရရင် ဒီIndexတွေဟာ US Marketတွေကို တိုင်းတာတဲ့ Major Indexတွေပါ။ DJI ဟာ အမေရိကန် Economyကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီး ၃၀နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ S&P 500ကတော့ Market Capitalisation အကြီးဆုံး Blue-chip 500၊ NASDAQ Compositeကတော့ Technology Companies 2774ခုနဲ့ Structureလုပ်ထားတာပါ။
ဘာလို့ ဒီIndexတွေ ခွေးကျကျလည်း ကြည့်ရအောင်။ အဓိကကတော့ Politically Stableမဖြစ်လို့ပါ။ USမှာ Obamaက ဘဏ်တွေကို ပိုပြီး Regulateလုပ်ဖို့ ဥပဒေအသစ်တွေကို Proposeလုပ်နေတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ အချက်က နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမက ဘဏ်တွေကို Public Moneyသုံးပြီး သူတို့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် Trading ပေးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ Technicallyကတော့ Proprietary Tradingလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေသာ အတည်ပြုခံရရင် သူတို့ဟာ Clients/Customersတွေ Accountအတွက် Tradingလုပ်နိုင်ယုံကလွဲလို့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဘာမှလုပ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒုတိယကတော့ Too-big-to-failဆိုပြီး ၂၀၀၈ခုနှစ်ကလို အစိုးရက tax payer moneyနဲ့ bailoutထပ်မလုပ်ရအောင် Too bigလို့ထင်ရတဲ့ banksတွေကို ခွဲပစ်ချင် ခွဲပစ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာလည်း Goldman Sachs, JP Morgan, Citiလို ဘဏ်ကြီးတွေအတွက် အများကြီး ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ US Federal Reserveရဲ့ ခေါင်ချုပ် Ben Bernankeရဲ့ သက်တမ်းဟာ Jan 31မှာ ကုန်ပါမယ်။ သူ့ကို သက်တမ်းထပ်တိုးသင့် မတိုးသင့် Senateမှာ Voteလုပ်ရပါမယ်။ Bernankeဟာ Obamaရဲ့ Supportအပြည့်ရထားပေမယ့် သူ့ကို အကောင်းမမြင်တဲ့ Senatorတွေလည်း ပါတီနှစ်ဘက်စလုံးမှာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ကြိုက်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပြဿနာက ဘက်က နည်းနည်းမျှသလိုဖြစ်နေတော့ သူ့ရဲ့ Extension Confirmationဟာ Approvedဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ သေချာပြောလို့ မရတာပါပဲ။ Marketအနေနဲ့ Bernankeရဲ့ Handlingကို အများစုက ကြိုက်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ Bernankeသာမရှိတော့ရင် ဘယ်လို Monetary Policyဆက်ဖြစ်မလည်းဆိုတဲ့ Huge Uncertaintyဟာ Investorတွေကို တော်တော်လန့်စေပါတယ်။
ဒါက ကမ္ဘာ့အနောက်ခြမ်း။ အရှေ့ဘက်မှာကတော့ တရုတ်ပြည်မှာ ဘဏ်တွေက Loanတွေထုတ်ချေးတာ ကြမ်းတယ်ဆိုပြီး Communist Partyက ဘဏ်တစ်ချို့ကို တစ်လမှာ ဘယ်လောက်ပဲချေးရမယ်ဆိုပြီး အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘဏ်တွေမှာ ရှိရမယ့် Capital Ratioကိုလည်း ၀.၅% တင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ့အမိန့်တွေရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ Businessesတွေအတွက် Money Flow / Liquidityကျသွားပါမယ်။ Credit Marketလို့လည်း ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၈ကုန်ပိုင်းလောက်က Financial Crisisစဖြစ်တုန်းက ဒီလိုပဲ Credit Market Freeze ဖြစ်ပြီး Domino Affectဖြစ်ကုန်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် တရုတ်ဘဏ်တွေ Listedလုပ်တဲ့ Hong Kongက Hang Seng Indexဟာ ၁၀%ပြုတ်သွားပါပြီ။
ဒါတွေအားလုံးကနေ ဘယ်လို ကောက်ချက်ချရမလည်းဆိုတော့
၁) Too much uncertainty now. If you do not know what is going on right now, better not doing anything.
၂) ဈေးကျတုန်းဝယ်ရမယ်ဆိုပေမယ့် ဈေးဆက်ကျနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိတုန်း ယားနေတဲ့ လက်ကို ခဏပြန်သိမ်းထားပါ။ Obama, Bernanke, Chinese Banksတွေ သဲသဲကွဲကွဲဖြစ်တဲ့အထိစောင့်ပါ။
၃) Nobody went broke taking profit - ကိုယ့်မှာ မြတ်နေပြီး ကိုင်ထားတာတွေရှိရင် စိတ်မသန့်ရင် ရောင်းပစ်လိုက်ပါ။
အောက်မှာ Major Index သုံးခုရဲ့ trend breaking ဖြစ်နေတဲ့ Chart တွေကို ပြထားပါတယ်။
Dow Jones Industraial Average Index
Nobody went broke taking profit!
Posted by Aung Myo Htet at 1/27/2010 01:28:00 PM 1 comments
Labels: alert, correction, technical analysis, warning